I-Mandala Tattoos Iingcamango Zombono Kwabesilisa Nabasetyhini - Tattoos Art Ideas
I-Mandala Tattoos Iingcamango Zombono Kwabesilisa Nabasetyhini
sonitattoo Agasti 29, 2016
Akukho nto ithi um tattoo weMandala ngowona owona mhle kunabo bonke emhlabeni. Uyabona kanye kunye nenkumbulo yomnatha we tattoo kwimemori yakho. Kukho amabali amaninzi axhalabisa nge tattoo ekhethekileyo. Namhlanje, akusekho abantu baseMandala abasebenzisa le tattoo. Ungayisebenzisa kwakhona.
Mandala tattoo intsingiselo
I-tattoo ye-Mandala inentsingiselo eninzi kwaye ibonisa ukutshatyalaliswa. Isangqa kwi tattoo sithetha ngokugqibelela kunye nokulinganisela kunye nokuphakade, xa ukhangela ibanga lonke indlela ukusuka kwinqanaba ukuya kuwo onke amanqaku. Zininzi iinkolo zisetyenziselwa ukuthetha izinto ezininzi kubathembekile babo.
unkolo yamaHindu - ngokwamaHindu, i-#mandala ithetha ukucamngca. Oku kungenxa yokuba isetyenziswe njengesigxininiso kwaye isixhobo ngokuphathelele kokomoya.
inkolo yamaKrestu - UbuKristu buyathatha i-mandala kwelinye iqanaba kuba liyakuchaza kwiindawo ezahlukahlukeneyo zecawa ezifana neefestile ezibonisa imisebenzi ebalulekileyo kwaye zinokusetyenziswa njengendlela yobugcisa.
inkolo yakwaBudda - I-Mandala inento enxulumene nabamaBuddha, bayayisebenzisa kwimimiselo yabo yonqulo nokucamngca. Isetyenziswe njengesibonakaliso sokulinganisela ebomini.
Mandala #tattoo sele yintoni abantu abaninzi basebenzise ukumela izinto ezininzi ebomini, njengezidalwa zasezulwini. I tattoo ingasetyenziswa ekwenzeni ezininzi iingxelo onokuzifumanisa ukuba ungumthandi we-tattoo inking kwaye ufuna i ngcamango.
Kuthetha ukuthini ukuba nomnxeba onje? Kule minyaka, sibonile amakhulu abantu abasebenzisa le tattoo ukuhlobisa imizimba yabo. U-Eveyone unombono wakhe wokujonga tattoo. Abantu abambalwa bathanda yona ngelixa abanye bengabikho, kwaye kulungele ngokupheleleyo ngenxa yokuba ayikho itiye. ngokusebenzisa
Kwiminyaka eminci kwangaphambili, lolu hlobo lomsebenzi lwaluvunyelwa kuluntu jikelele, kwaye abantu ababenokwenene babonwa njengento yokuvukela. ngokusebenzisa
3. I-Thigh Mandala Thigh
Into eninzi abangayazi ngayo yindlela indlela "tattoo" ekufakelwa ngayo igama lesiTahiti elithi "tatu" enenjongo yokuthintela into ethile. Ukucinga ukuba yonke into yaqala phi? ngokusebenzisa
5. Mulderla Mandala Tattoo
Zonke izinto ezicatshangelwayo, ingabe ufumene umoya obizwa ngokuba yi "Iceman" oye wafumanisa i-1991? Wayeyindoda ebalulekileyo eyayinomzimba wakhe ingene kwiindawo ezilungileyo ze-58. Uphando oluthile olubandakanya ukutshatyalaliswa kweseli lubonise ukuba wayeyiminyaka eyi-5300 ngokusebenzisa
6. Buyela emva kweMandala Tattoo
Kule miqolo, kubonakala ngokucacileyo ukuba ubugcisa bombutho akuyiyo indalo yokudalwa kwindlela nayiphi na indlela; kwakukho inani elikhulu leminyaka ngaphambili. ngokusebenzisa
7. I-Chest Mandala Tattoo
Iintlangano ezidlulileyo zibuyela kwinani elikhulu leminyaka elisetyenziselwa umsebenzi wokukhusela izifo. Ukusetyenziswa kweenaliti kwiinki umzimba wawusungulwa yiYiputa emva koko owasasaza ngaphaya kweGrisi, i-Arabia kunye nasekupheleni kwe-Asia. ngokusebenzisa
Nangona ukuba ekuqaleni kwakusetyenziswe ukuhlukanisa i-hoodlums, yatshintsha yaba ngumsebenzi eJapan kangangokuba iYazaza mafia yayisetyenziselwa ukuthusa abanye. ngokusebenzisa
9. I-Double Mandala Tattoo
Ukubuyela emva kweenkulungwane eziliqela ngaphambili; Kwakuyimilinganiselo yeentsapho ezinkulu kakhulu ukuba zibe neengqungquthela zabo ezinomzimba kodwa nangemva kokungeniswa kweNorman, le ndlela iphelile. ngokusebenzisa
10. I-Mandala Tattoo
Kuwo onke amaxesha, izixhobo kunye nezinto ezisetyenziselwa ukufumana inki ziguqukile ngokufanelekileyo kwiindawo ezibukhali zembambano esele isetyenziswe ngamashishini asetyenziswa njengenxalenye ye-1891. ngokusebenzisa
12. Kutheni Ufanele Uhambe I-Mandala Tattoo
13. Eyesabekayo iMandala Tattoo
14. Mulderla Mandala Tattoo
Kukho izinto ezininzi unokwenza uMandala wakho abukeke ngathi. Ukuba udidekile ngohlobo lwe tattoo # udweliso oya kuwenza inkino kwi-Mandala yakho, vele uye kwi-intanethi kwaye ujonge kuma-cent of designs eziza kulungeleka ngokupheleleyo. umthombo wesithombe
15. Buyela emva kweMandala Tattoo
Ukuba ufuna ngokwenene ukubheka okungafani nale nto, konke okufunekayo ukulungelelanisa tattoo yakho kunye neendlela zokubhala okanye ezibhalwe phantsi. Imfihlelo yokujonga bhetele kunye nekhethekileyo nge tattoo kukufumana oko abanye abazange benze ngeendlela zabo. umthombo wesithombe
I-tattoo ye-Mandala inomyalezo okhethekileyo onokuyithumela. Ngenye yezona tattoos ezigqibeleleyo ukuba ubani angaya kuzo. umthombo wesithombe
17. Mandala Tattoo
Hhayi nje kuphela enkulu kunye nenhle, ikunika umoya wokuzincama kunye nokunethezeka. Unokwenza ezininzi iimvavanyo ozifunayo ngokudweba izidalwa ezahlukeneyo, imilo okanye iiplani kwiMandala yakho eninzi inkululeko yendawo. umthombo wesithombe
18. I-Back Back Mandala Tattoo
Kukho izinto omele uziqwalasele ngaphambi kokuba uhambe kwi tattoo yakho yaseMandala. Umele ucinge ngomyalezo ozama ukuwuhambisa nge tattoo yakho. umthombo wesithombe
Kufuneka uqikelele ukuba ufumana tattoo ukuzukisa loo nxalenye yomzimba wakho. Mhlawumbi, ucinga ukuphuma kwisigijimi esingokomoya okanye olunye uhlobo lomyalezo ofuna ukusixelela. umthombo wesithombe
20. Mulderla Mandala Tattoo
Xa ucinga ukufumana loo tattoo enhle ye-Mandala, igxala lingaba yindawo efanelekileyo. Sinokuhlala sitshela ukuba ezininzi zabesifazane zisebenzisa lo mlo. umthombo wesithombe
21. I-shoulder Blade Mandala Tattoo
Akukho mntu unokukwazi ukubetha ukuzaliseka okuzayo xa unemibala enombala yeMandala embala njengale. Ngona bokuqala abasebenzisi be tattoo bayayithanda. umthombo wesithombe
22. Male Mandala Tattoo
Kwaye amadoda akakwazi ukushiywa ngaphandle kweT tattoo. Ngoyilo olufana nalolu hlobo, une tattoo enokuziqhayisa. umthombo wesithombe
24. I-Women Mandala Tattoo
Cofa apha ukuze uthole ngakumbi iMandala Tattoo Ink Idea yamantombazana
Tattoos zeJometritattoosizithunywa zezuluzengalo zengaloukutshiza amathambongesandlaiidotiicompass tattootattoos zohlangaihoi fish tattootattoo yamehloiifoto eziphakamileyotattooszomculo tattoosutywala tattootattooI-Ankle Tattoostattoozinyonii tattootattoo yedayimanitattoos kumantombazanaizigulaneiimpawu zezodiac zempawucute tattoostattoosbathanda i tattoosi-tattoostatto tattoosdesign mehnditattoos zenyangatattoos kubantuIintliziyo zeTattoostatto flower flowertattoossibiningombonotatna tattooowona mhlobo womhlobotattoiifatyambo zeentyatyamboizifuba zesifubai-cherry ityatyamboiipattoostattoo engapheliyotattoos zelangaiifotto zentamoIndlovu yeendlovutattoos ezinyawoIintyatyambo zeTattoo